थाइराइडबाट बच्न के गर्ने ? | Ratopati
थाइराइडबाट बच्न के गर्ने ?
काठमाडौं– शरीरलाई अत्यावश्यक हर्मोन थाइराइड टाउकोदेखि गोडासम्मका हरेका अंगका लागि जरुरी छ । यो हर्मोनले खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । जसलाई मेटाबोलिज्म प्रक्रिया भन्ने गरिन्छ ।
थाइराइड ग्रन्थी घाँटीको तल्लो भागमा हुन्छ र यसले हर्मोन उत्पादन गर्ने काम गर्छ ।
पछिल्लो समय यही थाइराइड ग्रन्थीमा हुने रोगका कारण धेरै मानिसहरु पीडित भएका छन् । थाइराइड रोग लागेपछि हर्मोन कम वा बढी उत्पादन हुने गर्छ ।
आयोडिनको कमी वा बढी दुवैमा थाइराइडको समस्या देखिने भएकाले खानामा यसको मात्रा मिलाएर खानुपर्छ । थाइराइड ग्ल्याणले आयोडिनलाई लिएर थाइराइड हर्मोन उत्पादन गर्छ । त्यसैले हाइपोथाइराइड भएमा आयोडिनयुक्त खाना कम खानुपर्छ । सी फूड तथा आयोडीनयुक्त नूनका पूर्ण रुपमा नियन्त्रण आवश्यक छ ।
कफि थाइराइड भएका विरामीहरुका लागि पीडादायक पेयपदार्थ हो । यसले दुखाई बढाउने काम गर्छ । बेचैनी तथा अनिन्द्रा जस्ता समस्याहरु पनि निम्त्याउँने काम गर्छ । तर कफिले सिधै थाइराइड भने बढाउँदैन ।
थाइराइड हुनेहरुका लागि रातो मासु घातक हुन्छ । रातो मासुमा कोलस्ट्रोल र फ्याट धेरै हुने भएकाले यसले तौल बढाउने गर्छ । जसका कारण समस्या झन् बढ्छ ।
थाइराइड भएकालाई रक्सी , बीयर आदीले निकै प्रभावित गर्छ । यसले गर्दा शरीरिक उर्जालाई प्रभावित पार्छ । यसका कारण थाइराइड भएका मानिसको निद्रामा समेत समस्या बढ्छ ।